HipJot, iOS (Cydia) को लागी एक धेरै आशाजनक नयाँ किबोर्ड आईफोन समाचार
HipJot, iOS को लागि एक धेरै आशाजनक नयाँ किबोर्ड (Cydia)
जब आईओएस just एक अफवाह मात्र थियो, टिम कुकले हामीमध्ये धेरैले आईओएस प्रयोग गर्नेलाई ठूलो आशा दिएका थिए, एप्पलको अपरेटिंग सिस्टमलाई अझ खुला बनाउन सक्ने सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्दै, जसले किबोर्ड जस्ता नयाँ विकल्पहरूको लागि बाटो दिन सक्दछ। हामी वर्षौं बितेका छौं। यो सत्य हो कि यसले राम्रोसँग काम गर्दछ, यो पनि सही छ कि यो सुधार भएको छ, तर यो कुरा सत्य होइन कि त्यहाँ अन्य धेरै सम्भावनाहरू छन् जुन वास्तवमै आकर्षक छन्, प्रसिद्ध प्रख्यात स्पाइप किबोर्ड जस्तो। एउटा नयाँ ट्वीक जसले भर्खर साइडिया, हिपजोतलाई थिचेको थियो, एक कुञ्जीपाटी प्रदान गर्दछ जुन बस प्रदान गर्दछ, र यद्यपि यो अझै बेटा चरणमा छ, यो राम्रो देखिन्छ। हामीले यसको परीक्षण गरेका छौं र हामी तपाईंलाई भिडियोमा देखाउँदछौं।
कुञ्जीपाटी मूल आईओएस भन्दा सौन्दर्य भन्दा भिन्न छ, तर टाइपको सामान्य तरिकाको साथसाथै, चिठ्ठीबाट चिठी, हामी यो गर्न सक्दछौं। किबोर्डमा तपाईको औंला स्लाइड गर्दै, हामीले लेख्न चाहेको शब्द बनाउने अक्षरहरूको माध्यमबाट, र हिपजोतले "अनुमान लगाउँछ" जुन शब्द हामी प्रविष्ट गर्न चाहन्छौं र यो हाम्रो लागि गर्छ। यदि यो सहि छैन भने हामी छनौट गर्न सक्दछौं कि हामी कुन विकल्पले चाहान्छौं त्यसले हामीलाई प्रदान गर्ने विकल्पहरूबाट। स्वत: रिक्त स्थानमा प्रवेश गर्न सक्षम हुँदै, र ठूला अक्षरहरूमा वाक्यको पहिलो अक्षर लेख्नु पनि उपलब्ध विकल्पहरू हुन् जसले लेख्न सजिलो पार्दछ।
HipJot पनि प्रदान गर्दछ अनुकूलन विकल्पहरूकुञ्जीपाटीको र select चयन गर्न सक्षम हुँदै, यसको चौडाई सेट गर्नुहोस् वा दुई हातमा अधिक सजीलो लेख्न कुञ्जीहरू दुई समूहमा अलग गर्नुहोस्। सेटिंग्स मेनू पहुँच कुञ्जीपाटीबाट नै गरिन्छ, स्पेस बटन होल्ड गरेर। यस समयमा त्यहाँ केही कार्यात्मक विकल्पहरू छन्, किनकि मैले सुरुमा संकेत गरेकै अनुसार यो पहिलो बीटा हो। तपाईं निम्न भिडियोमा यसले कसरी काम गर्दछ देख्न सक्नुहुन्छ।
लेखन सुरुमा सजिलो छैन, तर एक पटक तपाईले यसलाई केहि समयका लागि प्रयोग गर्नुभएपछि तपाई छिटो नयाँ लेखन विधिमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यस समयमा यो अ English्ग्रेजीमा मात्र उपलब्ध छ, तर यदि कसैले यसलाई चलाउन खोज्छ भने, तिनीहरूले रिपो by थप गरेर त्यसो गर्न सक्दछन्।cydia.myrepospace.com/jormyCy Cydia गर्न। याद गर्नुहोस् कि तपाईंले प्रणाली सेटिंग्समा अ keyboard्ग्रेजी किबोर्ड थप्नुपर्नेछ, र यो देखा पर्नको लागि तपाईंले सम्बन्धित अनुप्रयोगमा यसलाई सक्रिय गर्नुपर्नेछ। इच्छा यो स्पेनिश मा काम गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » HipJot, iOS को लागि एक धेरै आशाजनक नयाँ किबोर्ड (Cydia)
म यसलाई स्थापना गर्दछु र यसले मलाई पाउँदैन, र रेपोमा यसको नाम छ, निन, त्यसैले म नाम स्थापना गर्दछु म यसलाई राम्रोसँग स्थापना गर्दछु तर यसले केही राख्दैन। धन्यबाद
इमानुएललाई जवाफ दिनुहोस्
मैले लेखमा भनेझैं तपाईले अंग्रेजी किबोर्ड कन्फिगर गर्नु पर्छ।
लुइस Veloz भन्यो
नमस्कार, तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ? म यो पहिले नै आईओएस for मा days दिनसम्म चलाइरहेको छु, प्रश्न यो हो कि यो 'ट्रायल' कुञ्जीपाटी विकल्पमा देखा पर्दछ र यसले मलाई २ limits दिनसम्म सीमित गर्दछ, के त्यहाँ कुनै पनि तरीका पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ? धन्यबाद
लुइस Veloz लाई जवाफ दिनुहोस्
ब्याजर,, तपाईंको स्प्रि Springबोर्डबाट सूचनाहरू (Cydia) पहुँच गर्नुहोस्
अग्रणी CarPlay- अनुकूल कार रेडियो बनाउन